आफ्नै नातिनी करणी गर्ने हजुरबुवा पक्राउ - Everest Dainik - News from Nepal
आफ्नै नातिनी करणी गर्ने हजुरबुवा पक्राउ
पाँचथर, चैत २१ । आफ्नै नातिनीलाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्ने हजुरबुवालाई पाँचथर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार पाँचथर जिल्लाका ५८ बर्षीय एक पुरुषले आफ्नै सहोदर १२ बर्षिया नातिनीलाई गत ०७४ पौष १ गतेदेखि जबरजस्ती करणी गरी गर्दै आइरेहको भन्ने सूचनाको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
याे पनि पढ्नुस पैसा लिएर उत्तर पुस्तिका जाँच्ने २ लेक्चरर प्रहरीको फन्दामा
कसैलाई भनेमा मारीदिने धाकधम्की दिई बालिकालाई त्रासमा पारी जबरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्ने खबर पाई पिडकलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायव उपरिक्षक बामदेव गौतमले बताए ।
कानुनी कारवाहीका लागी सोमबार पक्राउ गरी मंगलबार पाँचथर जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भईरहेको उनले बताए ।
याे पनि पढ्नुस तपाइँमा तत्कालै विश्वास गर्ने बानी त छैन? अब विचार गर्नुस्!
पीडित बालिबालाई उद्धार गरी सुरक्षित आवास गृहमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।